The Ring Two (2005) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDB: 5.4/10 90953 votes
The Ring Two ဆိုသညျမှာ ထူးဆနျးသောဗှီဒီယိုကို တဈပတျအတှငျး အခွားတဈယောကျအား လှဲပွောငျးမပေးပါက ကွညျ့မိသူတိုငျး သဆေုံးရကွောငျး ရိုကျထားသော ရုပျရှငျဇာတျလမျးဖွဈသညျ။ ဒီဗှီဒိယိုသညျ စမျမာရာ ဆိုသော ငယျငယျကတညျးက အနှိပျစကျခံရပွီး မိနျးကလေးငယျတဈယောကျ သဆေုံးခွငျးနှငျ့ ဆကျနှယျနသေညျ။ စနျမာရာဝိညာဉျသညျ အိတျဒနျ၏ကိုယျကု ဝငျပူးရနျကွိုးစားခဲ့ညျ။ ရတှေငျးအောကျခွတှေငျ သူမသဆေုံးခဲရသောကွောငျ့ သူမဝိညာဉျ ပျေါလာသောနရောတိုငျး၌ ရတှေေ မွောကျမွားစှာ အရငျထှကျလာတတျသညျ။ ရမြေားသညျ ကွမျးပွငျတှငျ ရှိနရောမှ တဈခါတရံ မကျြနှာကကျြထိ တကျလာတတျသညျ။
ရခေယျြသညျ ထိုမိနျးကလေး သဆေုံးခဲ့သော လယျကှငျးဟောငျးထဲသို့ ရောကျသှားသညျ။ အောကျခွတှေငျ သူမ သမငျဦးခြိုမြားကို တှရေ့သညျ။ သမငျဦးခြိုမြား တဈခုလုံးအပွညျ့ပငျ။ ဒီတော့ သမငျမြားသညျ အိတျဒနျတှငျ ဆနျမာရာဝိညာဉျရှိကွောငျး ရရှိ၍ လကျစားခသြေညျအနနှေငျ့ ကားကို တိုကျခိုကျတာ ဖွဈနိုငျပသေညျ။သို့သျော စမျမာရာသညျ သမငျမုဆိုးမဟုတျပေ အနှိပျစကျခံရပွီး သဆေုံးရသော မိနျးကလေးငယျသာဖွဈသညျ။ သို့ဖွဈရာ သမငျမြားက သဘာဝလှနျစှမျးအား ရှိနတောဖွဈမညျ။ အနှိပျစကျခံပွီး သဆေုံးရသော မိနျးကလေး ဆနျမာရာဝိညာဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး မညျမြှ ထိတျလနျ့ကွောကျရှံဖှယျကောငျးလှသညျကိုတော့ . . .
The Ring Two ဆိုသည်မှာ ထူးဆန်းသောဗွီဒီယိုကို တစ်ပတ်အတွင်း အခြားတစ်ယောက်အား လွှဲပြောင်းမပေးပါက ကြည့်မိသူတိုင်း သေဆုံးရကြောင်း ရိုက်ထားသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ဒီဗွီဒိယိုသည် စမ်မာရာ ဆိုသော ငယ်ငယ်ကတည်းက အနှိပ်စက်ခံရပြီး မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက် သေဆုံးခြင်းနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည်။ စန်မာရာဝိညာဉ်သည် အိတ်ဒန်၏ကိုယ်ကု ဝင်ပူးရန်ကြိုးစားခဲ့ည်။ ရေတွင်းအောက်ခြေတွင် သူမသေဆုံးခဲရသောကြောင့် သူမဝိညာဉ် ပေါ်လာသောနေရာတိုင်း၌ ရေတွေ မြောက်မြားစွာ အရင်ထွက်လာတတ်သည်။ ရေများသည် ကြမ်းပြင်တွင် ရှိနေရာမှ တစ်ခါတရံ မျက်နှာကျက်ထိ တက်လာတတ်သည်။
ရေချယ်သည် ထိုမိန်းကလေး သေဆုံးခဲ့သော လယ်ကွင်းဟောင်းထဲသို့ ရောက်သွားသည်။ အောက်ခြေတွင် သူမ သမင်ဦးချိုများကို တွေ့ရသည်။ သမင်ဦးချိုများ တစ်ခုလုံးအပြည့်ပင်။ ဒီတော့ သမင်များသည် အိတ်ဒန်တွင် ဆန်မာရာဝိညာဉ်ရှိကြောင်း ရရှိ၍ လက်စားချေသည်အနေနှင့် ကားကို တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပေသည်။သို့သော် စမ်မာရာသည် သမင်မုဆိုးမဟုတ်ပေ အနှိပ်စက်ခံရပြီး သေဆုံးရသော မိန်းကလေးငယ်သာဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ သမင်များက သဘာဝလွန်စွမ်းအား ရှိနေတာဖြစ်မည်။ အနှိပ်စက်ခံပြီး သေဆုံးရသော မိန်းကလေး ဆန်မာရာဝိညာဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မည်မျှ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံဖွယ်ကောင်းလှသည်ကိုတော့ . . .
Charles Gibson Doug Metzger Frederic Roth Giselle Gurza Hideo Nakata Trudy Ramirez
Option 1 storage.msubmovie.com 516 MB SD (480p)
Option2server.mfile.cloud 516 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 516 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 516 MB SD (480p)
Option 8 storage.msubmovie.com 1.2 GB HD (1080p)
Option9server.mfile.cloud3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 10 sharer.pw3GB FHD (1080p) DTS 5.1
Option 11 storage.msubmovie.com3GB FHD (1080p) DTS 5.1